LA OGAADAY: Gurigii Ole Gunnar Solskjaer Ee Magaalada Manchester Oo Uu Ku Jiro Difaaca Liverpool Ee Virgil van Dijk Iyo Sababta Aanu Uga Saari Karayn – Latest Sports News
LA OGAADAY: Gurigii Ole Gunnar Solskjaer Ee Magaalada Manchester Oo Uu Ku Jiro Difaaca Liverpool Ee Virgil van Dijk Iyo Sababta Aanu Uga Saari Karayn
Tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa tan iyo markii loo magacaabay macalinka ku meel gaadhka ah ee Old Trafford waxa uu ku noolaa hudheelkii uu Jose Mourinho deganaa ee Lowry Hotel kaas oo ku yaala magaalada Manchester laakiin sababta dhabta ah ee uu gurigiisii u degi waayay ayaa noqotay mid qariib ah.
Difaaca kooxda Liverpool ee Virgil Van Dijk ayaa sabab u ah in Ole Gunnar Solskjaer aanu degin gurigiisa Manchester badal uu taas badalkeeda ku noolaado Lowry Hotel oo ah goobtii uu Jose Mourinho ku soo qaatay 127 usbuuc oo uu Man United maamulayay halkaas oo uu ku bixiyay lacag dhan £800,000 kun oo gini.
Haddaba maxaa sabab u ah in Virgil Van Dijk uu Ole Gunnar Solskjaer ku qasbay in uu ka maqnaado guriga qasriga ah ee 4 milyan gini ku qiimaysan ee uu magaalada Manchester ku lahaa?
Markii uu Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaartoyga Man United waxa uu magaalada Manchester gaar ahaan Cheshire ku lahaa guri qasri ah laakiin markii uu baxay waxa uu go’aan ku gaadhay in la iibiyo laakiin markii la waayay cid iibsata waxa uu go’aan ku gaadhay in la kireeyo.
Markii ay Liverpool la soo wareegtay difaaca dhexe ee Virgil Van Dijk waxa kiraystay guriga Ole Gunnar Solskjaer ee magaalada Manchester kadib markii uu ku qancay gurigan laakiin dhamaadkii sanadkii 2018 waxay Man United si ku meel gaadh ah kooxdeeda ugu magacowday Ole Gunnar Solskjaer kaas oo ay qasab ku noqotay in uu hudheel ku noolaado halkii uu gurigiisa ka degi lahaa.
Ole Gunnar Solskjaer iyo qoyskiisa ayaa hore gurigan ugu soo noolaa laakiin muu filayn in uu dib ugu soo laabanayo Manchester wuxuuna kireeyay guriga qasriga ah kaas oo ay hadda ku nool yihiin qoyska Virgil Van Dijk halka Ole Gunnar Solskjaer uu hudheelkii Mourinho degan yahay.
Laakiin jamaahiirta Liverpool ayaa la yimid qorshe uu Ole Gunnar Solskjaer ku heli karo gurigiisa isla markaana uu Van Dijk ugu banayn karo.
Qaar ka mid ah taageerayaasha Liverpool ayaa soo jeediyay in sida kaliya ee uu Ole Gunnar Solskjaer ku heli karo gurigiisa ay tahay in uu marka hore saddexda dhibcood ka qaato Manchester City ee kulanka Manchester Derby isla markaana uu Van Dijk ogolaan doono in uu meesha ka saaro heshiiskii uu kiro ahaanta ugu jiro gurigan.
Liverpool ayaa u baahan in ay caawin ka hesho Manchester United si ay kooxda Man City ay Old Trafford ugu garaacaan maaaama oo uu yahay kulanka ugu adag ee baaqiga u ah kooxda Guardiola laakiin marka laga yimaado baahida Liverpool ee guuldaro ay United bado Man City, waxaa ka wayn baahida ay kooxda Ole Gunnar Solskjaer u qabaan in ay kaalmaha sare ku dhamaystraan.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku dhaw in si rasmi ah loogu magacaabo shaqada tababaranimo ee Manchester United laakiin xataa haddii uu shaqadan si rasmi ah u helo waxa uu Van Dijk wali ku sii haysan karaa guriga Solskjaer ee magaalada Manchester maadaama oo xagaagii hore kiraystay isla markaana ay heshiis ku jiraan.
Si kastaba ha ahaatee, jamaahiirta Liverpool ayaa baraha bulshada ku soo bandhigay daroonka ay arintan ka qabaan waxayna xuseen in ay arintu aad u sahlan tahay si uu Ole Gunnar Solskjaer u sal dhigto Man United oo uu gurigiisa u helo balse marka hore waxay ka doonayaan in uu sabab u noqdo in Man United ay saddexda dhibcood ka qaadato Man City.